Ny LG Wing dia natomboka tamin'ny fihodinan'ny efijery sy Snapdragon 765G | Androidsis
Ny LG Wing dia natao ofisialy miaraka amin'ny fakantsary azo esorina sy ny efijery roa: ny iray amin'ireny dia azo soloina
LG dia nanatontosa hetsika fampisehoana iray izay nanehoany ny Lg wing, ny findainao finday avo lenta avo lenta izay misy fakan-tsary mihodina somary hafahafa izay manarona efijery faharoa, ka miteraka fantsona roa-efijery.
Ity fitaovana ity angamba no mahaliana indrindra hitantsika hatreto. LG dia efa nifidy tamin'ny finday misy efijery roa (ohatra: LG G8 sy LG V50 ThinQ), saingy ny rafitra ampiasain'ity terminal vaovao ity dia vaovao ary iray izay tsy nampihariny mihitsy. Ireto ambany ireto dia fariparitanay ny toetra sy ny pitsopitsony teknikan'ity finday ity.
1 Ny rehetra momba ny LG Wing vaovao misy efijery roa
Ny rehetra momba ny LG Wing vaovao misy efijery roa
Ho an'ireo vao manomboka, ny LG Wing, raha vao jerena dia toa tsy olana lehibe. Ny finday dia misy efijery feno izay misy bezel tery indrindra, izay somary miharihary kokoa eo amin'ny sisiny ambony sy ambany, saingy somary kely fotsiny.
Ny fitaovana dia tsy tonga miaraka amin'ny notch na perforation, satria manana fakantsary anoloana voahidy ao anaty modely azo esorina izay mivoaka isaky ny te hampiasa azy isika; 32 MP (f / 1.9) ity. Ho setrin'izany, raha ny momba ny rafitry ny fakan-tsary any aoriana, dia telo io ary hita ao amin'ny trano mahitsizoro misy zorony boribory sy flash LED roa sosona. Raha ny tena manokana, ny combo aoriana dia misy an'ity fanahafana manaraka ity: fakan-tsary lehibe 64 MP miaraka amina OIS sy aperture f / 1.8 + 13 MP fakan-tsary zoro malalaka miaraka amin'ny f / 1.9 sy 119 ° zoro fijery + 12 MP zoro somary malalaka miaraka amin'ny f / 2.2 ary ny fomba fijery 120 °.
Amin'ny lafiny efijery dia mampiasa ny finday takelaka lehibe diagonal P-OLED FullVision 6.8-inch Izy io dia manana vahaolana feno FullHD + 2.460 1.080 x 20.5 teboka izay manao endrika 9: 395 milaza hoe "ankehitriny", ho fanampin'ny zava-misy fa XNUMX dpi ny hakitroky ny pixel.
LG Wing miaraka amin'ny fampisehoana swivel
Ny efijery faharoa dia 3.9 santimetatra, teknolojia G-OLED ary manana endrika fampisehoana 1.15: 1, ka toradroa izany. Ny vahaolana an'io dia 1.240 x 1.080 teboka, raha ny hakitroky ny pixel vokariny dia 419 dpi. Miseho izany rehefa mihodinkodina ary apetraka marindrano ny efijery lehibe efa nofaritana, izay mahatonga ny LG Wing haka endrika "T" ary manome ny mpampiasa ny fahafaha-mampiasa ny takelaka roa miaraka.
Ny chipset an'ny processeur izay apetraka ao amin'ity fitaovana ity dia ny Qualcomm Snapdragon 765G, izay valo-core ary ampiarahina amin'ity tranga ity miaraka amin'ny RAM 8 GB sy habaka fitehirizana 128 na 256 GB (azo ovaina miaraka amin'ny microSD hatramin'ny 2 TB amin'ny tranga roa), noho izany dia misy kinova fahatsiarovana roa azo. Mandritra izany fotoana izany, ny bateria dia 4.000 mAh ary manana famahanana haingana amin'ny alàlan'ny USB-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible) sy ny tariby.
Ny safidin'ny fifandraisan'ny telefaona dia misy Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1 ary puce NFC handoavana vola tsy ifandraisana. Ny rafitra fandefasana azy dia ny Android 10 ambanin'ny LG UX ary misy mpamaky ny rantsan-tànana an-tsary ankoatra ny Fanoherana ny rano IP54 sy ny mari-pahaizana miaramila MIL-STD 810G izay manaporofo izany rehetra izany.
SCREEN Tale: P-OLED FullVision an'ny 6.8 santimetatra FullHD + an'ny 2.460 x 1.080 teboka (20.5: 9) sy 395 dpi / Faharoa: 3.9-inch G-OLED, 1.240 x 1.080 teboka (1.15: 1), 413 dpi
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128/256 GB (azo itarina amin'ny microSD hatramin'ny 2 TB)
CAMERA REAR Fakan-tsary lehibe 64 MP miaraka amina OIS sy aperture f / 1.8 + sensor an'ny zoro malalaka 13 MP misy f / 1.9 sy 119 ° sehatra fijery + 12 MP Sud zoro malalaka misy f / 2.2 sy 120 ° sehatry ny fijery.
CAMERA HATRANY MP 32 (f / 1.9)
BATERA 4.000 mAh miaraka amin'ny famandrihana Quick Charge 4.0+ haingana sy tsy misy tariby
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 ambanin'ny LG UX
CONNECTIVITY Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / Bluetooth 5.1 / GPS / NFC / 4G LTE / 5G
ASA hafa Mpamaky ny tanan-tànana amin'ny efijery / famantaran-tarehy / USB-C (USB 3.1 Gen 1 mifanentana) / fanoherana MIL-STD 810G / fanamarinana tsy misy rano amin'ny IP54
DIMENSION SY lanjan'ny 169.5 x 74.5 x 10.9 mm sy 260 grama
Ny LG Wing dia natomboka manerantany, izay no ahazoana antoka ny fahatongavany ho an'ny rehetra, mazava. Na izany aza, Korea Atsimo, fonenan'ny orinasa, no hany firenena hanombohany mivarotra amin'ny voalohany. Tsy mbola naseho ny vidiny sy ny daty fiaingany. Izy io dia misy loko roa: Aurora Grey (volondavenona) sy Illusion Sky (volondavenona maivana).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny LG Wing dia natao ofisialy miaraka amin'ny fakantsary azo esorina sy ny efijery roa: ny iray amin'ireny dia azo soloina
Ahoana ny fanamboarana ny disconnement resaka Discord amin'ny Android